ကိုယ်ဖိရင်ဖိ – Grab Love Story
ဆွေဆွေမာ သည် ရန်ကုန်က “ပွင့်လန်းဝေဆာ ” မာဆတ်ခန်းမှာ အလုပ်လုပ်နေပေမယ့် ရန်ကုန် ဇာတိတော့မဟုတ်ပါဘူး ။ ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ ခေတ်ကို ပြောင်းလာတဲ့နောက် ရန်ကုန်မြို့မှာ ၀င်ငွေကောင်းတဲ့ အလုပ်တခုကို လုပ်ဖို့ နယ်ကနေ ရောက်လာတာပါ ။ နယ်မှာတုံးက မီးခဲပြာဖုံး ဖြစ်နေတဲ့ အရိုင်းစပယ်လေး ဆွေဆွေမာသည် ရန်ကုန်ကို ရောက်လာတော့ လူပွဲစား တယောက်က အလှပြင်မိတ်ကပ် ကျွမ်းတဲ့ မိန်းမရှာတယောက်ကို ပြင်ခိုင်းလိုက်လို့ တောသူပုံပျောက် မြို့သူဟော့ရှော့လေးတယောက် ပုံစံ ပေါက်လာရသည် ။ လူပွဲစားမကြီး ဒေါ်အေးသီက “ မာဆတ်မှာ အလုပ်ရမည်..မာဆတ်မှာ လုပ်ရင် ယောက်ျားတွေက ထိတွေ့ကိုင်တွယ် တာတွေတော့ အနည်းနဲ့အများ ရှိလိမ့်မည်…တော်ရုံ ထိတာကိုင်တာတွေ ဆိုရင် နင်တို့သည်းခံရမယ်….မိတ်မပျက်အောင် ကပ်စတန်မာတွေကို သည်းခံ ခွင့်လွှတ်ကြရမယ်…” လို့ ဆွေဆွေမာတို့ကိုလက်ချာရိုက်သည် ။ ဒေါ်အေးသီက မာဆတ် သင်တန်းပေးသည် ။ တကယ်တမ်း အနှိပ်သင်ပေးတာက ထိုင်းနိုင်ငံက လှမ်းခေါ်ထားတဲ့ အနှိပ်သမ ။ ဒီထိုင်းမက သူတို့ ဘန်ကောက်မှာ ဘယ်လိုဘယ်ပုံ နှိပ်ကြသည် ဆိုတာကို နမူနာ အစမ်း ပြသသွားမှာ ဖြစ်သည် ။ ဆွေဆွေမာ တို့ ကောင်းကောင်း ကျွမ်းသွားတဲ့အထိ အဲဒီထိုင်းမကို သင်ခိုင်းသည် ။ ထိုင်းမက တကယ့် ဆရာမကြီး ။ မြောက်ကြွမြောက်ကြွနဲ့ အော်လိုက် ငေါက်လိုက်နဲ့ ..။ ဆွေဆွေမာကို လုပ်ခိုင်းတာက ဆီမာဆတ် ။ ဆီလိမ်းပြီး နှိပ်တာ ။ ဆီမာဆတ်က အနှိပ်ခံတဲ့ယောက်ျားတွေက ကိုယ်တုံးလုံးနဲ့မို့ နှိပ်နေတဲ့အချိန် သူတို့ရဲ့ တန်ဆာချောင်းတွေကိုမြင်ရတွေ့ရသည် ။ ထိုင်းမက တကယ့် ကပ်စတန်မာ အစစ်တွေနဲ့ သူကိုယ်တိုင် နှိပ်ပြတဲ့အချိန်တွေက ဆွေဆွေမာတို့သည် ယောက်ျားတွေရဲ့အ၀တ်မဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတွေကို စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ မြင်တွေ့ခဲ့ရသည် ။ ထိုင်းမက ဟက်ပီးအန်းဒင်း လုပ်နည်းလည်း သင်ပေးသည် ။
သူတို့ပေါင်ကြားက ဒုတ်တွေကလည်း တန်းလန်း တန်းလန်းနဲ့။ ယောက်ျားနဲ့ တခါမှ မကြုံဘူးသေးတဲ့ ဆွေဆွေမာသည် ယောက်ျားဒုတ်တွေကို မြင်ရတော့ အရမ်းကို စိတ်လှုပ် ရှားခဲ့ရသည် ။ ကာမစိတ်တွေလည်း နိုးကြားထကြွခဲ့ရသည် ။ ထိုင်းမက “ ဟက်ပီးအန်းဒင်း ” က လက်နဲ့ဘဲ လုပ်ပေးရတာ….တခါတလေ ကိုယ့်ကို ဘောက်ဆူး များများပေး တဲ့လူဆိုရင်တော့ နင်တို့ နို့တွေ ပေးကိုင်ချင်လည်း ကိုင်လိုက်ပေါ့ဟာ..အောက်ပိုင်းကို နှိုက်လို့မရအောင် ဘောင်းဘီကြပ်ကြပ်ဝတ်ထားလိုက်ပေါ့ ” လို့ သင်ပေးသည် ။ အစမ်းသဘောနဲ့ မာဆတ်ခန်းပိုင်ရှင် ခေါ်လာတဲ့ လူကြီးတယောက်ကို ဆွေဆွေမာ စပြီး ဆီလူးမာဆတ် စလုပ် ပေးရသည် ။ ဒီလူကြီးက ပိန်ညောင်ညောင်နဲ့ အသက် လေးဆယ်လောက် ။ ဆွေဆွေမာတို့ မာဆတ်ခန်းက သီး ခြား အခန်းလေးတွေနဲ့ ။ တံခါးလည်း ပိတ်ထားလို့ရသည် ။ ဆွေဆွေမာ မာဆတ်အခန်းလေးထဲကို ၀င်သွားတော့ ခပ်မှောင်မှောင်မှာ တဘက်အသေးစားလေးကို ခါးနေရာမှာ တင်ဖုံးထားပြီး မှောက်အိပ်နေတဲ့ လူကြီးကို တွေ့လိုက် ရသည် ။ ကိုယ်လုံးတီး ချွတ်ထားတဲ့ ဒီလူကြီးရဲ့ ကိုယပေါ်မှာ တဘက် အသေးစားလေးဘဲ ဖုံးထားတယ် ဆိုတာ ကို သိနေတာနဲ့တင် ဆွေဆွေမာ့စိတ်တွေ လှုပ်ရှားနေတာ အရမ်းပါဘဲ ။ ဆွေဆွေမာလည်း အပြာနုရောင် စပို့ရှပ်လေးနဲ့ ဘောင်းဘီအကြပ် အနက်ရောင်ကို ၀တ်ထားသည် ။ လူကြီးက နံမည် ဘယ်လိုခေါ်သလဲ လို့ မေးလိုက်တော့ ကမန်းကတန်း ခေါင်းထဲပေါ်လာတဲ့ “မြတ်နိုး ” ဆိုတဲ့နံမည်ကို ပါးစပ်က ပြောလိုက်မိသည် ။ “ မြတ်နိုး..ဟား..တအားလှတဲ့ နံမည်လေး…လူလှသလား ကြည့်ပါရစေလား….” လူကြီးက မှောက်ရက် အိပ်နေရာကနေ ပက်လက်လှန်လိုက်သည် ။“ အိုး..တအား လှတယ်ကွယ်…အမလေး…. ဘယ်မြို့သူလဲ..တွံတေးဖက်ကလား….” ဆွေဆွေမာလည်း သူ့ပေါင်တန်တွေကို စနှိပ်သည် ။ ထိုင်းမ သင်ပေးတဲ့အတိုင်း ပေါင်ရင်းကို နှိပ်ပေးတဲ့အခါ လက်ခုံနဲ့ သူ့ပေါင်လည်က ဒုတ်ကို မသိမသာလိုလိုနဲ့ ပွတ်ပေးလိုက်တာက အကြိမ်ကြိမ်ပေါ့ ။ ဘာသားနဲ့ ထုထားတာ လိုက်လို့ ။ မကြာခင်မှာဘဲ သူ့ဒုတ်ကြီး ငေါငေါကြီး ထောင်ထလာသည် ။
လူကြီးတော့ ဘယ်လိုနေပြီလဲ မသိဘူး ။ ဆွေဆွေမာတော့ ကာမစိတ်ရိုင်းတွေ တထိန်းထိန်းနဲ့ ထကြွလာရပြီး စောက်ဖုတ်ထဲက တအား ယားတက်လာသည် ။လူကြီးရဲ့ ဒုတ်အပေါ်က တဘက်စလေးလည်း အောက်ဖက်က ပေါင်ပေါ်ကို လျောကျလာသည် ။ ဒုတ်ကြီး မတ်မတ်ကြီး ထောင်နေတာကို ဆွေဆွေမာ မြင်လိုက်ရသည် ။ “ မြတ်နိုး….ဦး တအား တင်းကြပ်လွန်းနေတယ်ကွယ်..ဦးကို ဖြေလျော့ပေးပါလားဟင်….” ဒစ်ကားကားကြီးနဲ့ ဒုတ်ကြီး မတ်မတ်ထောင်နေသည် ။ ဆွေဆွေမာလည်း တံတွေးမြိုချနေရသည် ။ တတ်နိုင်ရင် စုတ်ပစ်လိုက်ချင်သည် ။ ထိုင်းမက အစွပ်မစွပ်ဘဲ စုတ်မပေးဖို့ အထပ်ထပ် မှာထား သတိပေးထားသည် ။ အေကိုက်ရင် တခါထဲ လျောမည်..လက်နဲ့ဘဲ ကွင်းတိုက်ပေးဖို့ သေသေချာချာ မှာထားသည် ။ ဒုတ်အပေါ်ကို ဆီဘူးထဲက ဆီတွေ လောင်းချလိုက်ပြီး လက်ကလေးနဲ့ ပွတ်သပ် ဆော့ကစားပေးလိုက်သည် ။ “ အိုး…အား….ကောင်းလိုက်တာ မြတ်နိုးရယ်…” လို့ ညည်းငြူသည် ။ လူကြီးရဲ့ လက်က ဆွေဆွေမာရဲ့ ရင်စိုင်တွေ အပေါ်ကို ရောက်လာသည် ။ ဆွေဆွေမာက ခြေတလှမ်း နောက်ဆုတ်ပြီး ရှောင်တိမ်းလိုက်သည် ။ လူကြီးက “ ကိုင်..ကိုင်လို့ ရမလားဟင်…. မုန့်ဖိုး ပေးပါ့မယ်….” လို့ ပြောရင်း စပို့ရှပ်ရဲ့ အောက်ကို လက်သွင်းဖို့ ကြိုးစားလိုက်သည် ။ ဆွေဆွေမာက “ မုန့်ဖိုး ဘယ်လောက် ပေးမှာလဲ..” လို့မေးလိုက်သည် ။ လူကြီးက “ သုံးသောင်း ” လို့ ဖြေလိုက်သည် ။ တကယ်တော့ ဆွေဆွေမာရဲ့ စနေနှစ်ခိုင်သည် ဘယ်ယောက်ျား ကိုင်တာကို မခံဘူးသေး ။ သူ့ဒုတ်ပူနွေးနွေးကြီးကို ကိုင်ဆုတ် ပွတ်တိုက်ပေးနေရင်း စိတ်တွေက တအား ထကြွနေတော့ တင်းမာဖီးထနေ တဲ့ ရင်သားတွေကိုလည်း အကိုင်ခံချင်လာမိလို့ စပို့ရှပ်ကို လှန်တင်ကာ ဘရာစီယာကို ချိတ်ဖြုတ်ပေးလိုက်သည်။
“ အိုး လှလိုက်တာကွယ်….” ကော့ကော့လေး ဦးမော့နေတဲ့ ရင်သားစိုင်နှစ်မွှာကို မြင်လိုက်ရလို့ လူကြီး အရမ်း သဘောကျသွားပြီး လက် ကြီးနဲ့ ဆုပ်နယ်ကိုင်တွယ်လေသည် ။ ဆွေဆွေမာလည်း တောင်မတ်ထကြွနေတဲ့သူ့ဒုတ်ကြီးကို ကွင်းတိုက်ပေးပြီ ။ “ အိုး……အိုး….အား….. လူကြီးရဲ့ လက်ချောင်းတွေက ထောင်ထစူကြွနေတဲ့ နို့သီးလေးတွေကို ဆွဲချေနေသည် ။ ဆွေဆွေမာလည်း ဖီလင်တွေ စွတ်တက်ပြီး သူ့ဒုတ်ကြီးကို ငုံ့စုတ်ချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွား ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည် ။ လူကြီးက တအားထကြွပြီး ပေါင်ကြားကိုလည်း လက်ကြီးနဲ့ ဆုပ်ကိုင်လာပြန်သည် ။ သို့ပေမယ့် ထိုင်းဆရာမရဲ့ လက်ထပ်သင်ကြားပေးခဲ့တာတွေကြောင့်လူကြီးရဲ့ ဒုတ်ကနေ လရည်ပျစ်ပျစ်တွေ တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ ပန်းထွက်သွားရတဲ့အထိ ထု ပေးလိုက်နိုင်သည် ။ လူကြီး တအီးအီးညည်းလိုက်တာတွေကို မြင်လိုက်ရသည် ။ လူကြီး ပက်လက်လန်ကျသွားသည် ။ ဆွေဆွေမာလည်း ကျွတ်နေတဲ့ ဘရာစီယာနဲ့ စပို့ရှပ်ကို ပြန်ဝတ်လိုက်သည် ။ “ အဆင်ပြေလားဟင်…..ဦး….” “ အင်း…ကျေးဇူးပါ သမီးရယ်…..၀ှူး…….” လူကြီးကို ရေနွေးနဲ့ ရေပတ်တိုက်ပေးရသည် ။ ပထမဆုံး အတွေ့အကြုံမှာ ဆွေဆွေမာ ပိုက်ဆံလည်းရ ရင်လည်းတုန် အဖုတ်လည်း စိုစိုရွှဲခဲ့ရသည် ။ အဲဒီနောက်ပိုင်း လူပုံစံ အမျိုးမျိုး ဒုတ်အမျိုးမျိုးကို ကြုံဖူးလာရပြီး ကျွမ်းသထက် ကျွမ်းလာသည် ။ ပိုက်ဆံလည်း ပို ဖန်တတ်လာသည် ။ ဆွေဆွေမာလည်း ငွေများများ ပေးတတ်တဲ့ ကပ်စတန်မာ ဆိုရင် နို့ပေးတာအပြင် ဘောင်းဘီကို ချွတ်ချပေးပြီး ဖင်တုံးတွေကိုလည်း ပေးကိုင်သည် ။ လက်သွက်တဲ့လူတွေက ဖင်ကြားကနေ စောက်ဖုတ်ကို လိုင်းဆွဲတတ်သည် ။ ဒီလို အခါမျိုးမှာ ဆွေဆွေမာသည် စောက်ဖုတ် တအားယားပြီး ခံချင်ကုန်းချင်စိတ်တွေ ၀င်သည် ။ တချို့ဘဲတွေက ပုလွေမှုတ်ခိုင်းသည် ။ ဒါပေမယ့် ဆွေဆွေမာလည်း နို့နဲ့ဖင် ပေးကိုင်တာထက် ပိုမသွားခဲ့ဘူး ။ ဒီနေ့ ရောက်လာတဲ့ ကပ်စတန်မာကတော့ ၀င်လာကထဲက ဆွေဆွေမာ သူ့ရုပ်ကို သဘောကျသည် ။ အသက် နှစ်ဆယ်ကျော် လူရည်သန့်လေး ။ အသားလတ်သလို ရုပ်က နုဖတ်နေသည် ။ ရုတ်တရက် ဆိုရင် ဆယ်ကျော်သက် ကောင်လေးတယောက်လို့ ထင်ရသည် ။ ဆွေဆွေမာ တင် မဟုတ်ဘူး ။ ဂျာကြီးလည်း သဘောကျသွားသည် ။ ဆွေဆွေမာတို့ ဂျာကြီးက သုံးဆယ်စွန်းစွန်း ကချင်နဲ့ ပဒေါင်ကပြား ။ ခေတ်ဆန်ပြီး ဟော့တ်သည် ။ သူက သူကြိုက်တဲ့လူ ဆို၇င် တခါတခါ သူကိုယ်တိုင်တောင် ၀င် နှိပ်ပေးတတ်သည် ။ ကပ်စတန်မာကို ဆွေဆွေမာက ဂျာကြီး မဆွဲခေါ်ခင် အခန်းထဲကို သွင်းလိုက်သည် ။
ဆွေဆွေမာရဲ့ စိတ်တွေ မတည်ငြိမ်ဘူး ။ ဒူးတွေတောင် တုန်နေသည် ။ ကိုလူချောလေးကို ကိုယ်တုံးလုံးနဲ့ ဆီ လူးပြီး နှိပ်ပေးတာ ခါတိုင်းလို အချိန် ဆွဲမနေတော့ဘဲ သူက မလုပ်ခိုင်းဘဲနဲ့ သူ့ဒုတ်ကို ကိုင်ပြီး ကွင်းတိုက်ပေး လိုက်မိသည် ။ သူက မတောင်းဆိုဘဲနဲ့လည်း နို့တွေကို ပြမိသည် ။ သူက မကိုင်ဘူး ။ ရှက်တတ်သူဘဲ ။ သူ့ လက်တဖက်ကို ဆွဲယူပြီး ဖွံ့ထွားတဲ့ ရင်စိုင်တွေ အပေါ်ကို တင်ပေးမိသည် ။သူ့ဒုတ်က မတ်မတ်ထောင်နေသည်။ ဆွေဆွေမာ စိတ်မထိန်းနိူင် ။ သူက မခိုင်းဘဲ သူ့ဒုတ်ကို စုတ်ပစ်ချင်လို့ “ စုတ်ပေးမယ်နော် ” လို့ သူ့ကို ပြောလိုက်မိသည် ။ သူက “ နေအုံး..မင်းတို့ မန်နေဂျာမကိုလည်း တွေ့ချင်တယ်…” လို့ ပြောသည် ။ ဆွေဆွေမာက သူက မနှိပ်ဘူး ..” လို့ ပြောလည်း မရဘူး . အတင်း ခေါ်ခိုင်းလို့ ဂျာကြီးကိုလည်း ခေါ်ပေးလိုက်ရသည် ။ ဂျာကြီးလည်း တောင်မတ်နေတဲ့ ဒုတ်ကြီးကြီးနဲ့ သူ့ကို သဘောကျလိုက်တာမှ တခစ်ခစ်နဲ့ ။ သူက ဆွေဆွေမာ့ကို သူ့ဒုတ်ကို စုတ်ခိုင်းပြီး ဂျာကြီးကိုတော့ အင်္ကျီနဲ့ ဘရာစီယာကို လှန်တင်ခိုင်းပြီး နို့တွေကို သူ့မျက်နှာနား ကပ်ခိုင်းပြီး နို့စို့သည် ။ နှစ်ယောက် တယောက် ဇာတ်လမ်း ခင်းနေပြီ ။ သူက ဇာတ်လိုက်မင်းသား လေး ဒီဇိုင်းမို့ ဆွေဆွေမာရော ဂျာကြီးရော အလုပ်သဘောလောက်တင် မဟုတ်ဘဲ သူလိုချင်တာတွေကို အနှမြောမရှိဘဲ ထိုးပေးထိုးကျွေးမိနေကြပြီ ။ ဆွေဆွေမာလည်း သူ့လီးကို အပြတ် စုတ်ပစ်မိသလို ဂျာကြီးကလည်း နို့စို့တာတွေကို ခံနေသည် ။ သူ့လက်တဖက်က ဂျာကြီးရဲ့ စကပ်အောက်ကနေ စောက်ဖုတ်ကို သမနေသည် ။ သူ့လက်ညှိုးနဲ့ လက်ခလယ်က ဂျာကြီးရဲ့ စောက်ဖုတ်ထဲကို သွင်းပြီး ကလိပေးလိုက်တာကြောင့် ဂျာကြီး “ အိုး….အီး……….အင်း…….” လို့ ညည်းလိုက်သည် ။ သူ့ငံကျိကျိ လီးတုတ်တုတ်ကို အားရပါးရစုတ်လိုက်နေမိတဲ့အချိန်ဆွေဆွေမာရဲ့ စောက်ဖုတ်သည် စောက်ရည်တရွှဲရွှဲ ဖြစ်နေပြီ ။ ခံချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွား ပေါ်ပေါက်နေသည် ။ တခါမှ ယောက်ျားနဲ့ မလိုးဖူးသေးတာကြောင့်လည်း ဒီလီးတုတ်တုတ်ကြီးနဲ့ စောက်ဖုတ်ထဲ ထည့်ဆောင့်ခံလိုက်ရရင် စောက်ဖုတ် ပြဲသွားပြီး တအားနာလေမလားလို့ ကြောက်စိတ်တွေ ပေါ်မိသည် ။ ဂျာကြီးကတော့ ယောက်ျား အတွေ့အကြုံများခဲ့ပြီးသား ။ ကပ်စတန်မာထဲက ကပ္ပလီ လီးအရှည်စား အတုတ်စားကြီးနဲ့တောင် လိုးဖူးခဲ့ပြီးပြီလို့ ဂျာကြီးက ပြောပြခဲ့ဖူးသည်။ ဆွေဆွေမာသည် ကိုယ်လုံး ဖွံ့ဖြိုး အချိုးကျတဲ့ ကောင်မလေးပါ ။ သို့ပေမယ့် ဂျာကြီးသည် သူမထက် ပိုတောင့် သည်လို့ ဆွေဆွေမာ ထင်သည် ။ ဒီ ဇာတ်လိုက်လေးနဲ့ကျတော့ ဂျာကြီးသည် ဟန်မဆောင်နိုင် ။ သူ့နံမည်ကိုတောင် ဆွေဆွေမာနဲ့ ဂျာကြီး မသိ ကြ ။ သူဘယ်ကလဲ ဆိုတာလည်း မသိကြ ။ သူချောလို့ ကြည့်ကောင်းလို့ အိနြေ္ဒမဆည်နိုင်ကြဘဲ သူနဲ့ ကဲနေ ကြတာ ဖြစ်သည် ။
“ ကဲ ဘာဂျာမှုတ်မယ်…..မမကို အရင် မှုတ်မယ်…လာ..ကုတင်ပေါ် ပက်လက်လှန် အိပ်လိုက် ပေါင်တွေ ဖြဲပေး..” ဂျာကြီးသည် အိပ်မွေ့ချ ခံထားရတဲ့ လူလို သူ့အမိန့်ကို တသွေမတိမ်း လိုက်နာသည် ။ သူခိုင်းသလို ပက်လက်အိပ်လိုက်ပြီး ပေါင်တန်တွေကို ဖြဲပေးလိုက်သည် ။ ဆွေဆွေမာမှာတော့ လီးကို အားပါးတရ စုတ်နေရာက လီးကို ပါးစပ်ထဲက ထုတ်ပစ်လိုက်ရတာကြောင့် ဟာတာတာကြီး ဖြစ်ကျန်ရစ်ရင်း ဇာတ်လိုက်ကိုလူချောက ဂျာကြီးရဲ့ စောက်ဖုတ်ကို လျာနဲ့ ယက်တာကို ရင်တုံစိတ်လှုပ်ရှားရင်း ကြည့်နေရသည် ။ ဖေါင်းမို့ကြွနေတဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးကို သူ့လျာကြီးနဲ့ အပေါ်အောက် အစုန်အဆန် ယက်ပေးနေတော့ ဂျာကြီး တအားအားနဲ့ ဖီလင်တွေ စွတ်တက်ပြီး ကော့ပျံနေရင်း ပေါင်တန်တွေကို စိလိုက်ဖို့ ကြိုးစားသလို အနောက်ဖက်ကို ဆုတ်ပြေးဖို့လည်း လုပ်ပေမယ့် လူချောလေးက ဂျာကြီးရဲ့ ပေါင်တန်တွေကို ချုပ်ကိုင်ထားလို့ မအောင်မြင်ဘဲ လျာယက်တာတွေကို ခံနေရသည် ။ ရုတ်တရက် ဇာတ်လိုက်ကိုလူချောက ယက်နေတာကို ရပ်လိုက်ပြီး…ဆွေဆွေမာကို “ အ၀တ်တွေ အကုန်လုံး ချွတ်ပစ်လိုက်စမ်း…” လို့ ပြောလိုက်လို့ ဆွေဆွေမာလည်း ဂျာကြီးတုံးကလိုဘဲ စိတ်အညှို့ခံထားရတဲ့ လူတယောက်လိုသူခိုင်းစေတာကို ချက်ချင်းဘဲ လုပ်လိုက်မိသည် ။ ကိုယ်ပေါ်က အ၀တ်တွေကို ခပ်သွက်သွက် ချွတ်ပစ်လိုက်သည်။ “ အနောက်ကနေ လီးကို လာစုတ်ပေး..” သူ့ထပ်ဆင့် အမိန့်သံကြောင့် ဆွေဆွေမာလည်း ကုတင်ပေါ်မှာ မှောက်ရက် စောက်ဖုတ်ယက်နေတဲ့ သူ့အနောက်ကို သွားလိုက်သည် ။ သူက ဒူးထောက် ဖင်ကြွပေးလိုက်တော့ တောင်မာနေတဲ့ သူ့လီးကြီး ပေါ်လာသည် ။ ဆွေဆွေမာလည်း သူ့ပေါင်ကြားထဲ ပက်လက်ဝင်အိပ်လိုက်ပြီး လီးကြီးကို ပါးစပ်ထဲ ငုံစုတ်ပစ် လိုက်သည် ။ လူချောလေးက စောက်ဖုတ်ကို တပြတ်ပြတ်ယက် ဆွေဆွေမာ့ပါးစပ်ထဲကိုလည်း တစွပ်စွပ်နဲ့ ညှောင့်သွင်းနေသည် ။ ဆွေဆွေမာ့အဖို့ လီးကြီးနဲ့ ပါးစပ်ထဲ အလိုးခံနေရတာက စိတ်ကြွဖွယ် ဖီလင်ဆန်းတခုပါ ။ ဂျာကြီးရဲ့ မချိမဆန့်အော်သံလေး ထွက်လာသည် ။ ကိုလူချောရဲ့ လျာက ဂျာကြီးရဲ့ စောက်ဖုတ်ခေါင်းအတွင်းထဲကို ထိုးသွင်းပြီး မွှေနှောက်ကလိပေးနေလို့ပါ ။ ဂျာကြီးသည် လျာထိုးသွင်း ကလိချက်ကို မခံနိုင်လို့ ရုန်းထွက်ပြေးဖို့ အကြိမ်ကြိမ် ကြိုးစားပေမယ့် ကိုလူချောက သူ့ရဲ့ သန်မာတဲ့ လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ဂျာကြီးရဲ့ ပေါင်တန်နှစ်ဖက်ကို တအား ဆုပ်ကိုင်ထားလို့ ကိုလူချော ကလိ တာတွေကို ဆတ်ဆတ်လူးခါအောင် ခံနေရသည် ။
ကိုလူချောသည် ဂျာကြီးရဲ့ စောက်ဖုတ်ထဲကို လျာထိုးသွင်း မွှေနှောက်နေတဲ့အချိန် ဆွေဆွေမာရဲ့ ပါးစပ်ထဲကိုလည်း သူ့လီးတုတ်တုတ် ရှည်ရှည်ကြီးနဲ့ ထိုးဆောင့်လိုးနေသည် ။ ဆွေဆွေမာလည်း တွဲလောင်းကျ နေတဲ့ သူ့လဥကြီးနှစ်လုံးကို လက်နဲ့ လှမ်းကိုင်လိုက်မိသည် ။ ဒီအချိန်မှာ မာဆတ်အခန်းလေးရဲ့ တံခါး ၀ုန်းကနဲ ပွင့်လာသည် ။ တုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင် လူကြီးတယောက် ၀င်လာသည် ။ သူ့လက်ထဲက ဖုန်းကင်မရာလေးက လျှပ်တပျက်မီး တဖျတ် ဖျတ်နဲ့ ..။ “ အို….” ဂျာကြီးရဲ့ ကြောက်လန့်တကြား အော်သံလေးကြောင့် ကိုလူချောလည်း ဂျာကြီးစောက်ဖုတ်ကနေ မျက်နှာခွာလိုက် ပြီး အနောက်ကို လှည့်ကြည့်သည် ။ ကိုလူချော ပါးစပ်မှာ အရည်တွေ ပေပွနေသည် ။ “ ကဲ …လှိုင်မြင့်မိုး…..ထ….ထ…..တော်ပြီ..မင်းကလည်း အရေးထဲ အရသာခံနေတယ်…….” လှိုင်မြင့်မိုး ဆိုတဲ့ ကိုလူချောလေးရဲ့ လီးကြီး ဆွေဆွေမာရဲ့ ပါးစပ်ထဲက လျောကနဲ ထွက်သွားပြီ ။ တုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင်လူကြီးက ဂျာကြီးနဲ့ ဆွေဆွေမာတို့ အ၀တ်တွေ ပြန်ဝတ်ဖို့ ကြိုးစားတာကို ခွင့်မပြုဘူး။ ဓါတ်ပုံတွေဘဲ ရိုက်နေလို့ ဂျာကြီးရော ဆွေဆွေမာရော နို့တွေနဲ့ ပေါင်ကြားက အဖုတ်နေရာကို လက်တွေနဲ့ဖုံး ကွယ်ထားကြပြီး မျက်နှာတွေကိုလည်း ငုံ့ထားမိကြသည် ။ “ မင်းတို့ မာဆတ်အခန်းက ဒါတွေ လုပ်နေတယ် ဆိုတာကို ဒို့ သတင်းရထားတာ ကြာပြီ …လက်ပူးလက်ကြပ် ဖမ်းချင်လို့ အခုလို အကွက်ဆင် အသွင်ယူ လုပ်လိုက်ရတာဘဲ…..” လူတုတ်ကြီးက အသံသြသြကြီးနဲ့ ပြောလိုက်တဲ့အခါ အ၀တ်တွေ ပြန်ဝတ်လိုက်ပြီးတဲ့ လှိုင်မြင့်မိုး ဆိုတဲ့ ကိုလူချောလေးက “ ဟုတ်တယ်….ကျနော့်နံမည်က ဒုရဲအုပ်လှိုင်မြင့်မိုး….ဒါက ကျနော့် ဆရာ မြို့နယ်မှူး ရဲမှူးဦးဆန်းထူး….” လို့ ပြောပြီး စိစစ်ရေးကပ်ပြားကို ထုတ်ပြသည် ။ ဂျာကြီးလည်း တုန်ရီတဲ့ အသံလေးနဲ့ “ ကျမတို့ကို ဖမ်းလိုက်ပြီပေါ့နော်……ဆရာတို့ရယ်….သနားပါအုံး..မရှိလို့ လုပ်စားကြတာပါ…” လို့ လက်အုပ်ချီပြီး တောင်းပန်စကား ပြောလိုက်သည် ။ ဆွေဆွေမာလည်း မျက်ရည်ပေါက် ပေါက် ကျရင်း..“ ရှိခိုးပါတယ်..ဆရာကြီးတို့ရယ်…မဖမ်းပါနဲ့နော်….တောင်းပန်ပါတယ်….” လို့ တောင်းပန်လိုက် သည် ။ ဦးဆန်းထူး ဆိုတဲ့ လူတုတ်ကြီးက “ ဘာ အခုမှ ငိုနေကြတာလဲ…ငိုမနေနဲ့အပိုဘဲ..မင်းတို့က လုပ်တုံးက လုပ်ပြီး ” လို့ ခပ်မာမာ ပြောလိုက်သည် ။ ဒီအချိန်မှာ တခြားအခန်းက မာဆတ်သမလေး တယောက် သူတို့အခန်းထဲကို ခေါင်းပြူကြည့်လာသည် ။ “ ဟိတ် လာစမ်း…..” ဦးဆန်းထူးက အော်ခေါ်လိုက်လို့ မာဆတ်သမ ကောင်မလေး အခန်းထဲကို ၀င်လာသည် ။
မင်းတို့ ပိုင်ရှင်ကဘယ်သူလဲ..ပြောစမ်း… ကောင်မလေးကတုန်တုန်ရီရီနဲ့..ကျမ…..မ….မ…..မသိဘူးရှင့်ဂျာကြီးကို မေးပါသူဘဲသိတယ်…လို့ ပြန်ပြောသည် ။ ဂျာကြီးက “ ပိုင်ရှင်က….ဒေါ်ဖြိုးကေသီဇော် ပါ…” လို့ အသံတုန်တုန်နဲ့ ဖြေလိုက်သည် ။ ဦးဆန်းထူးက “ ငါ..အဲဒီ ပိုင်ရှင် မိန်းမနဲ့လည်း တွေ့ချင်တယ်…..” လို့ ပြောလိုက်တဲ့အခါ ဂျာကြီးလည်း “ ကျမ ခေါ်ပေးပါမယ်….အ၀တ်တော့ ပြန်ဝတ်ခွင့်ပေးပါလား ဆရာကြီး….” လို့ ပြောလိုက်သည် ။ “ အင်း…၀တ်….၀တ်….ခုချက်ချင်း ပိုင်ရှင် ကို ဖုန်းခေါ်လိုက်စမ်း…..” “ ဟုတ်…ဟုတ်…..” “ မင်းနံမည်က ဘာလဲ ဂျာကြီး…..” လှိုင်မြင့်မိုးက မေးလိုက်သည် ။ “ ကျမ….ကျမ…နံမည်က ၀င့်ဝင့်ဝါစိုး ပါရှင့်…..” လို့ ဂျာကြီးက ခပ်တိုးတိုးလေး ဖြေလိုက်သည် ။ “ မင်းကကော…” “ ဆွေဆွေမာ….ပါ….” လို့ ဆွေဆွေမာလည်း ခေါင်းလေးငုံ့ပြီး ခပ်တိုးတိုး ဖြေလိုက်သည် ။ ဂျာကြီးနဲ့ ဆွေဆွေမာတို့ အ၀တ်တွေကို အမြန်ကောက်ယူ ၀တ်လိုက်ကြသည် ။ ကိုလူချော ဒုရဲအုပ် လှိုင်မြင့်မိုးက ဂျာကြီး ရဲ့ ဖုန်းကို စားပွဲလေးအပေါ်ကနေ ကောက်ယူလိုက်ပြီး ဂျာကြီးကို လှမ်း ပေးလိုက်သည် ။ ဂျာကြီးက ပိုင်ရှင် သူဌေးမကို ဖုန်းခေါ်လိုက်သည် ။ သူဌေးမ ဒေါ်ဖြိုးကေသီဇော်က မြို့နယ်မှူးဦးဆန်းထူးကို မာဆတ်အခန်းနဲ့ ကပ်ရက်က သူမပိုင် ဟိုတယ်ကို ဖိတ် ခေါ်လိုက်သည် ။ ဒေါ်ဖြိုးကေသီဇော်ရဲ့ ရုံးခန်းကြီးထဲကို ဦးဆန်းထူး…လှိုင်မြင့်မိုး…ဂျာကြီး ၀င့်ဝင့်ဝါစိုး နဲ့ ဆွေဆွေမာတို့ ရောက်သွားကြသည် ။ ဒေါ်ဖြိုးကေသီဇော်သည် အသက် သုံးဆယ်ကျော် အရွယ် မိန်းမချော တယောက် ဖြစ်နေ သည် ကို ဦးဆန်းထူးနဲ့ လှိုင်မြင့်မိုးတို့ တွေ့လိုက်ရသည် ။ “ အိုး……ဒေါ်ဖြိုးကေသီဇော် ဆိုလို့ အသက်ကြီးကြီး မှတ်နေတာ..တကယ့်ကို ချောလှတဲ့ မမလေး တယောက်ပါလားဗျာ…” လို့ လှိုင်မြင့်မိုးက စပ်ဖြဲဖြဲ မျက်နှာပေးနဲ့ ပြောလိုက်သည် ။ ဒေါ်ဖြိုးကေသီဇော်က “ အလုပ်စကား ပြောကြရအောင်လားရှင်….ရှင်တို့က ကျမရဲ့ ၀န်ထမ်းလေးတွေကို ဖမ်းကြ တော့မလို့လားရှင်…..” လို့ ခပ်တည်တည်နဲ့ မေးလိုက်သည် ။ ဦးဆန်းထူးက မျက်နှာမာနဲ့ “ ခင်ဗျားတို့က ဥပဒေဘောင်ထဲ မနေရင်တော့ ဖမ်းရမှာက ကျုပ်တို့ အလုပ်ဘဲ…ကဲ ဘာပြောအုံးမလဲ..ကျုပ်တို့ ခင်ဗျားရဲ့ မာဆတ်ကိုလည်း ပိတ်ပစ်ရမယ်…..” လို့ ပြောလိုက်သည် ။ ဒေါ်ဖြိုးကေသီဇော်က “ အိုး…အိုး….နေ….နေပါအုံး..ဆရာကြီးရယ်……စိတ်လိုက်မာန်ပါ မလုပ်လိုက်ပါနဲ့…ညှိကြရအောင်ပါ…” လို့ တားလိုက်သည် ။ ဦးဆန်းထူးက “ ဘာလဲ ဗျ..ခင်ဗျားက ကျုပ်ကို လပ်ထိုးမလို့လား……ဒီလို မလုပ်နဲ့လေ…ကျုပ်တို့က လပ်မစားဘူး….” လို့ ခပ်မာမာနဲ့ ဟောက်လိုက်သည် ။ ဂျာကြီးက သူဌေးနဲ့ ဦးဆန်းထူးတို့ ကြားထဲကို ၀င်လိုက်သည် ။ “ ပြေလည်အောင် လုပ်ပေးကြပါရှင်..ကျမ…ကျမတို့ အချုပ်ထဲကို မသွားပါရစေနဲ့……” သူဌေးမ ဒေါ်ဖြိုးကေသီဇော်က “ ဟုတ်ပါတယ်ရှင်….ကျမ ပြေလည်ချင်ပါတယ်….အကိုကြီးတို့ အမှုမလုပ်ကြပါနဲ့ အကိုကြီးတို့ ကျေနပ်အောင် အစစ တောင်းပန်ပါတယ်…လိုအပ်တာတွေ ..ကျမ တာဝန်ယူ လုပ်ကိုင်ပေးပါမယ်.. မာဆတ်ခန်းကိုလည်း မပိတ်ပါရစေနဲ့ရှင်…..” လို့ လေသံပျော့ပျော့နဲ့ ပြောလိုက်သည် ။
“ အင်း….ကျနော်တို့က တကယ်တော့ အထက်က စီမံချက်နဲ့ လာလုပ်တာပါ…..လွယ်လွယ်နဲ့တော့ ညှိလို့ မရ ဘူး ထင်တယ်….ဘယ်လိုထင်လဲ ဆရာ…..” လို့ လှိုင်မြင့်မိုးက ပြောလိုက်သည် ။ ဦးဆန်းထူးရဲ့ မျက်နှာက ခပ်တင်းတင်း ခပ်မော့မော့…။ “ ဟုတ်တယ်…အပေါ်က စိတ်ဝင်စားတဲ့ ကေ့စ်…..လွယ်လွယ်နဲ့တော့ မရဘူး…….” လို့ ပြောလိုက်သည် ။ ဒေါ်ဖြိုးကေသီဇော်က “ အားလုံး ပြေလည်စေရပါမယ် ဆရာတို့ရယ်…ဆရာတို့ ကျေနပ်အောင် လုပ်ပေးပါမယ်…” လို့ ပြောလိုက်သည် ။ ၀န်ထမ်း မိန်းကလေးတွေက စားစရာသောက်စရာ လင်ပန်းတွေနဲ့ ရောက်လာကြသည် ။ “ သုံးဆောင်ကြပါရှင်..အေးအေးဆေးဆေး ဆွေးနွေးကြရအောင်…..” နာရီဝက်ခန့် ဆွေးနွေးကြပြီးနောက် ဂျာကြီးနဲ့ ဆွေဆွေမာတို့သည် ဦးဆန်းထူးနဲ့ လှိုင်မြင့်မိုးတို့ရဲ့ ရဲကားပြာ ကြီးထဲမှာ ပါသွားပြီ ။ အချုပ်ခန်းဆီကိုတော့ မဟုတ် ။ ဦးဆန်းထူးရဲ့ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းကြီး ဆီကိုပါ ။ ဆွေဆွေမာရဲ့ လက်တွေ အေးစက်နေကြသည် ။ ဂျာကြီးရဲ့ လက်ကို တင်းတင်း ဆုပ်ကိုင်ရင်း….” ဂျာကြီး….ဆွေမာ တခါမှ မနေဖူးသေးဘူး…ကြောက်တယ်..” လို့ ပြောလိုက်မိသည် ။ ဂျာကြီးက “ ဖြစ်ပါတယ်ဟာ..နင် အိုကေမှာပါ.. ” လို့ ပြန်ပြောလိုက်သည် ။ ယောက်ျားတွေကို ကွင်းတိုက်ပေးဖူးသလို စောစောက ကိုလူချော လှိုင်မြင့်မိုးရဲ့ လီး ကြီးကို စုတ်ပေးဖူးပေမယ့် တခါမှ အလိုး မခံဖူးသေးလို့ ဆွေဆွေမာ လန့်နေတာပါ ။ဦးဆန်းထူးရဲ့ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းကြီးသည် ဆွေဆွေမာနဲ့ ဂျာကြီး ၀င့်ဝင့်ဝါစိုး တို့ အံ့သြသွားရလောက်အောင် သား နား သစ်လွင်နေသည် ။ ဦးဆန်းထူးက သူတို့ကို စိတ်ကြိုက် ဖြုတ်တော့မယ်တို့ ဂျာကြီးနဲ့ ဆွေဆွေမာတို့ ထင်လိုက်သည် ။ ဦးဆန်းထူးသည် သူဌေးမ ဒေါ်ဖြိုးကေသီဇော်နဲ့ ညှိလိုက်သည် ။ သူဌေးမက သူ့မာဆတ်ခန်း အပိတ်မခံရအောင် တရားအစွဲမခံရအောင် ဂျာကြီးဝင့်ဝင့်ဝါစိုး နဲ့ ဆွေဆွေမာတို့ကို ထိုးကျွေးလိုက်ခဲ့သည် ။ ငွေလည်း ဘယ်လောက် ပေးလိုက်ရသလဲတော့ မသိဘူး ။ ဦးဆန်းထူးတို့က ဆွေဆွေမာနဲ့ ဂျာကြီးတို့ကို စိတ်တိုင်းကျ ဖြုတ်ကြတော့မည် ။ ကွန်ဒိုထဲ ရောာက်တာနဲ့ ဦးဆန်းထူးက “ ကဲ ညည်းတို့ ရေချိုးကြ..သေသေချာချာ ချိုးကြ..ပါးစပ်လည်း ဆေး သွားတိုက်ကြ….ဟိုကြားဒီကြား အနံ့မနံစေနဲ့…..” လို့ ပြောလိုက်လို့ ဆွေဆွေမာနဲ့ ဂျာကြီးတို့ ရေချိုးခန်းထဲကို ၀င်ခဲ့ကြရပါသည် ။
ရေချိုးနေကြတဲ့အချိန်မှာ ဦးဆန်းထူး တံခါး လာခေါက်ပြီး..“ နင်တို့ စောက်ဖုတ်မွှေးတွေကို အပြောင် ရိပ်ထားကြ” လို့ လာထပ်ပြောပါသည် ။ ဂျာကြီးနဲ့ ဆွေဆွေမာလည်း တယောက်စောက်မွှေးကို တယောက် ရိပ်လိုက်ကြပါသည် ။ ရေချိုးပြီးလို့ အိမ်ရှေ့ကို ပြန်ထွက်ခဲ့တဲ့အခါ ဦးဆန်းထူး မရှိတော့ပါဘူး ။ မိန်းကလေး တယောက်ဘဲ ထိုင်နေတာကို တွေ့ရသည် ။ ဒီ မိန်းကလေးက “ ဒီမှာဘဲ ခဏ နားနေကြ….ဆရာကြီး ခဏကြာရင် ပြန်လာလိမ့်မယ်….” လို့ ပြောသည် ။ ဒီမိန်းမလည်း ရဲတယောက်ဘဲ လို့ခန့်မှန်းရတာဘဲ ..။ ဂျာကြီးနဲ့ ဆွေဆွေမာတို့လည်း ကြက်ဒိုင်က အသတ်ခံရဖို့ စောင့်နေရတဲ့ ကြက်ကလေးတွေလို စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ ထိုင်နေရင်း ဦးဆန်းထူး ပြန်အလာကို စောင့်နေကြရပါသည် .။ သုံးလေးနာရီ ကြာပြီးနောက် သူတို့ကို စောင့်ကြပ်နေတဲ့ မိန်းမဆီကို ဦးဆန်းထူးက ဖုန်းလှမ်းဆက်သည် ။ ဆွေဆွေမာတို့ကို တနေရာကို ခေါ်သွားဖို့ ညွှန်ကြားလိုက်သည် ။ “ ကဲ….အမတို့…ကျမနဲ့ လိုက်ခဲ့…ထွက်ပြေးမယ်တော့ မကြံနဲ့နော်…အမှုကြီးသွားမယ်….” လေသံမာမာနဲ့ ပြောတာကို ခံလိုက်ရသည် ။ အောက်ကို ဆင်းခဲ့ကြတော့ ကားအနက်ရောင်ကြီး တစီး အသင့်စောင့်နေတာကို တွေ့လိုက်ရသည် ။ “ ကဲ တက်ကြ….” ဆွေဆွေမာနဲ့ ဂျာကြီးတို့ ခြောက်မိုင်ခွဲဖက်က ခြံတခြံထဲကို ရောက်သွားရသည် ။ အိပ်ခန်းတခန်းဆီမှာ စောင့်ကြရသည် ။ မကြာခင် လူတယောက် ဆွေဆွေမာရဲ့ အခန်းထဲကို ၀င်လာသည် ။ အသက်ငါးဆယ်ကျော်လောက် ရှိတဲ့ ပိန်ပိန်ပါးပါး ရွှေရောင်ကိုင်း ပါဝါမျက်မှန်နဲ့ ။ သန့်သန့်ပြန့်ပြန့် နဲ့ လူကြီး တယောက် ။ “ မိန်းကလေး..မင်းနံမည် ဘာလဲကွ….” အသံက သြဇာရှိသည် ။ မင်းစိုးရာဇာ အသံမျိုး …။ “ ဆွေဆွေမာ ပါ…ဦး….” ““ နံမည်အမှန် ဟုတ်ရဲ့လား….” “ ဟုတ်…..” “ ထားပါတော့..ထားပါတော့….ပြောပါအုံး..မင်း အသက်ကရော ဘယ်လောက်လဲ…..” လူကြီးက ဆွေဆွေမာနဲ့ ကုတင်ပေါ်မှာ ဘေးချင်းယှဉ်ရက် ထိုင်ရင်း မေးနေတာပါ ။ “ နှစ်ဆယ်..ပါ ဦး…..” “ ဟေ..ဒီအလုပ်ကို ဘယ်တုံးက စ လုပ်တာလဲကွ…..” “ ကျမ…ကျမ….ပြည့်တန်ဆာ မဟုတ်ပါဘူး..ဦး…ကျမ..မာဆတ် အခန်းကပါ……” ဆွေဆွေမာက သူတို့ ဖြစ်ပျက်တာတွေကို အကျဉ်းချုံးကာ ပြောပြလိုက်သည် ။
ငိုရှိုက်ပြီး “ ကျမ..အပျိုစစ်စစ် ပါ..ကျမ တခါမှ ယောက်ျားနဲ့ မကြုံဖူးသေးပါဘူး…..ကြောက်လို့ လိုက်ခဲ့ရတာပါ ဦးရယ်…ကျမကို ကယ်ပါနော်..” လူကြီးက “ ကလေးမ..ငါ့ကို သဘောကောင်းတယ် ဆိုပြီး ပုံပြင်တွေ ပြောမနေနဲ့နော်…”လို့ ပြောလိုက်ပြီး ရယ် နေသည် ။ “ ကျမ တကယ် ပြောတာပါ ဦးရယ်….ကျမ အပျိုစစ်စစ်ပါ..တခါမှ မကြုံဖူးသေးပါဘူး……တကယ် အမှန်ပါ….” လို့ ဆွေဆွေမာက အထပ်ထပ် ငိုယိုကာ ပြောတော့ လူကြီးလည်း စိတ်ဝင်စားသွားသည် ။ ဟုတ်မဟုတ် စမ်းကြည့်မယ်..ဟုတ်ရင်တော့ ငါတယောက်ထဲနဲ့ဘဲ ပထမဆုံး ဆက်ဆံဖူးတဲ့ မင်းလေးကို ငါ အပိုင်သိမ်းလိုက်မယ်ကွာ….. မင်း…..ကိုယ်ပေါ်က အ၀တ်တွေကို တခုမကျန် ချွတ်ပစ်လိုက်စမ်း….. ဟုတ်…ဦး…… ဒီအချိန်မှာ တဖက်က အခန်းမှာတော့ ဂျာကြီး ၀င့်ဝင့်ဝါစိုး သည် သူမအခန်းကို ၀င်လာတဲ့ လူကြီတယောက် နဲ့ ရင်ဆိုင်နေရသည် ။ ခပ်ဖိုင့်ဖိုင့် အသက် ငါးဆယ်ခန့် လူရည်သန့် အဖိုးကြီး ။ “ မင်း ငါ့ကို ဘယ်သူလဲ သိသလား…” “ မသိပါဘူး ဦး….” လူကြီးက ၀င့်ဝင့်ဝါစိုးကို သူ့ဘေးနားမှာ လာထိုင်ခိုင်းလိုက်သည် ။ ငါ့နံမည်က ဦးသပြေ ..မင်း နောက်ကျရင် ငါ ဘယ်သူ ဆိုတာ သိလာမှာပါ….မင်းက တော်တော် ချောတာဘဲ….မင်းနံမည်က ဘယ်သူ….. ၀င့်ဝင့်ဝါစိုး ပါ ဦး…. နံမည်က တော်တော် မိုက်တာဘဲ…..မင်း အသက်ကို ငါ ခန့်မှန်းကြည့်မယ်….၂၅…..ဒါမှ မဟုတ် ၂၈…. ၀င့်ဝင့်ဝါစိုး က ရယ်လိုက်ပြီး…..ကျမ သုံးဆယ်ပါ …ဦး……လို့ ဖြေလိုက်သည် ။ ဟ….မယုံနိုင်စရာပါလား…..ဒါနဲ့ မင်း ဒီအလုပ် လုပ်စားနေတာ ကြာပြီလား…..အမှန်ပြောနော်..မညာနဲ့ ….. ကျမ..ဖါသည် မဟုတ်ပါဘူး…… ဘာ…. ကျမ မာဆတ်ခန်းက မန်နေဂျာပါ ….. ၀င့်ဝင့်ဝါစိုးက ဖြစ်ခဲ့တာတွေကို ရှင်းပြလိုက်သည် ။ အော်.ဒီလိုလား..ဘယ်လိုဘဲ ဖြစ်ဖြစ်ကွာ…မင်း အတွေ့အကြုံတော့ ရှိတယ် မဟုတ်လား..၀င့်ဝင့်ဝါစိုး……. ၀င့်ဝင့်ဝါစိုး က ခေါင်းညှိမ့်ပြသည် ။ ငါနဲ့မင်း အလုပ်ဖြစ်မယ် ဆိုရင် ငါက မင်းကို ကောင်းကောင်း ဘောက်ဆူးချမှာ….ငါက တခြား အကူအညီတွေလည်း အများကြီး ပေးနိုင်တဲ့ကောင်ကွ…..မင်းကို သဘောကျမိတယ်….. ဘယ်လိုလဲ…. ၀င့်ဝင့်ဝါစိုးလည်း ဒီလူကြီးရဲ့ ပုံကို နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာတွေရဲ့ မျက်နှာဖုံးတွေမှာ တွေ့ဖူးထားခဲ့တာပါ…တကယ့် ဧရာမ လူကြီးတယောက် ….. ဦးသဘောပါ….လို့ ၀င့်ဝင့်ဝါစိုးက တိုးတိုးလေး ပြောလိုက်သည် ။ ချက်ချင်းလည်း ဆုံးဖြတ်လိုက်သည် ။
ဒီလူကြီးနဲ့ နေလိုက်ဖို့….. ကဲ…မင်းကိုယ်ပေါ်က အ၀တ်တွေ အကုန်လုံးကို ချွတ်ပစ်လိုက်ကွာ…. ဟုတ်…ဦး….. ၀င့်ဝင့်ဝါစိုး ထိုင်နေရာက မတ်တပ် ထရပ်လိုက်သည် ။ ဦးသပြေ က စူးစိုက်ပြီး ခြေဆုံးခေါင်းဆုံး ကြည့်နေသည် ။ ၀င့်ဝင့်ဝါစိုး ကိုယ်ပေါ်က အ၀တ်တွေကို တခုပြီး တခု ချွတ်ပြီ ။ အချိုးကျ ဖွံ့ဖြိုးတဲ့ သူမရဲ့ ကိုယ်လုံးလေး အပေါ်မှာ ဘာ အ၀တ်မှ မကျန်တော့တဲ့ အခါ ဦးသပြေကအိုး….သိပ်လှတယ်ကွာ…… လို့ ပါးစပ်က ထုတ်ဖေါ်ပြောလိုက်တာကို ကြားလိုက် ရသည် ။ ကဲ လာပါအုံး..ဦးဆီကို….. ဆွေဆွေမာ ရှက်နေသည် ။ တကယ်တမ်း ကိုယ့်ကို စူးစိုက်ကြည့်နေတဲ့ လူတယောက် အရှေ့မှာ ကိုယ်တုံးလုံး ချွတ်ဖို့ ဆိုတာက မလွယ်လှ။ မီးတွေကလည်း ထိန်ထိန်လင်းနေသည် ။ “ ဟိတ်….ချွတ်လေ..ဘာငိုင်နေတာလဲ…..” “ ဟို….ဟို…..ဆွေမာ..ဆွေမာ…ရှက်…” “ဟ…..၀က်ဖြစ်နေမှ ရွှံ့ကြောက်မနေနဲ့လေ….လင်မယား ဘ၀မှာ အရှက်ကုန်တယ် တဲ့..နင်နဲ့ ငါနဲ့က မကြာခင် လင်မယား အရာ မြောက်ကြတော့မှာ…ဟီးဟီး…….” “ မီး ပိတ်လိုက်ပါလား ဦးရယ်……” လူကြီးသည် တဟားဟားနဲ့ သဘောကျရယ်မောလိုက်သည် ။ “ ဒီမှာ ကောင်မလေး….” “ ဟုတ်…..” “ မင်းဟာ ဒီတိုင်းပြည်မှာ ကံအကောင်းဆုံး လူထဲမှာ ပါသွားပြီ ဆိုတာ သဘောပေါက်လိုက်ကွာ..မင်း အခုလို ငါ့ ကို အ၀တ် ကုန်ချွတ်ပြတဲ့အတွက် မင်း အရမ်း အကျိုးရှိသွားမှာ…..” ဆွေဆွေမာလည်း သူပြောတာကို နားမလည် ။ လူကြီးက ဆွေဆွေမာ့အလိုကို လိုက်သည် ။ မျက်နှာကျက်က မီးကို ပိတ်ပေးလိုက်သည် ။ ရေချိုးခန်းထဲက မီး ရောင်ကတော့ ရှိနေသေးသည် ။ တော်တော်လေးကို မှောင်သွားသည် ။ ဆွေဆွေမာလည်း အ၀တ်တွေကို တခုမကျန် ချွတ်ပစ်လိုက်သည် ။ “ ဟား…မင်း နို့တွေက တော်တော် လှတာဘဲ…..လာစမ်း..ဒီအနားကို……” လူကြီးက ဆွေဆွေမာကို သူ့အနားကို ဆွဲခေါ်လိုက်ပြီး လုံးဝန်း တဲ့ ရင်သားနှစ်ခိုင်ကို သူ့လက်ဖ၀ါးကြီးနဲ့ ဆုပ် ကိုင်ကြည့်သည် ။ “ ဟူး….ကောင်းလိုက်တဲ့နို့ကြီးတွေ….” နှုတ်ခမ်းကြီးတွေနဲ့ ငုံခဲ စို့ပါတော့သည် ။ “ အိုး…….ဦး……..” လူကြီး သူ့ခါးဝတ်ပုဆိုးကို ချွတ်ချလိုက်သည် ။
ညိုမောင်းတဲ့ ခြေထောက်တွေ ကြားက တုတ်တုတ်ခဲခဲ အတန်ကြီး ငေါငေါကြီး ထောင်ထနေတာကို ဆွေဆွေမာ တွေ့လိုက်ရလို့ ကြက်သီးတွေ တဖျန်းဖျန်း ထသွားရသည် ။ လူကြီး ဆွေဆွေမာ့ တင်ပါးကြီးတွေကိုလည်း ဆုပ်ညှစ်ကြည့်သည် ။ ကိုင်သည် ။ ပွတ်သည် ။ “ မင်းတော်တော် တောင့်တာဘဲ..ငါ ကြိုက်သွားပြီ……” သူ့လက်ကြီးက ပေါင်ရင်းဂွဆုံ နေရာကို ဖျတ်ကနဲ ရောက်သွားသည် ။ အမွှေးရှင်းထားတဲ့ မို့ပြောင်တင်းနေတဲ့ တြိဂံပုံ ဆီးခုံဖေါင်းဖေါင်းကြီကို သူ ကိုင်သည် ။ ပွတ်သည် ။ စမ်းသည် ။ “ စောက်ဖုတ်..တအားလှတယ်ကွာ….” ကုတင်ပေါ် ကန့်လန့်ဖြတ် အိပ်ခိုင်းပြီး ပေါင်တန်တွေကို ဆွဲဖြဲလိုက်ပြီး လူကြီး ဒူးထောက် ထိုင်ချသည် ။ ဆွေဆွေ မာရဲ့ မိန်းမကိုယ်ကို သူ့နှာခေါင်းကြီးနဲ့ ရှူရှိုက်နေသည် ။ “ ဟား……အနံ့မရှိဘူး…..မင်း ရေဆေးထားလား…..” “ ဟုတ်…ဆေးထားပါတယ်……” လူကြီးရဲ့ လျာကြီး စောက်ဖုတ်ကွဲကြောင်း အတိုင်း ပလပ် ဆိုတဲ့ အသံထွက်အောင် ယက်ပစ်လိုက်တာကို ဆွေ ဆွေမာ ခံလိုက်ရပြီ ။ “ အို့…ဦး…….” တချက်ဘဲ ယက်ပြီး ရပ်လိုက်တာ မဟုတ် ။ ဆက်တိုက်ဘဲ ပလပ်ပလပ် ပလပ်နဲ့ ယက်နေပြီ ။ ရသာဖူး အစိလေးကို လျာကြီးက ကလော်ထည့်သွားလို့ ဆွေဆွေမာ တုန်ခါလူးသွားရသည် ။ လျာကြီးရဲ့ ထိတွေ့မှုတွေကို မခံနိုင်လို့ ကိုယ်ကို အနောက်ကို တွန်းရွှေ့ ဆုတ်ပြေးဖို့ ကြိုးစား လိုက်သည် ။ လူကြီးရဲ့ လက်တွေက ဆွေဆွေမာရဲ့ တင်ပါးကြီးတွေကို တအား ဆုပ်ညှစ်ထားလို့ ဘယ်လိုမှ ရုန်းထွက်လို့ မရနိုင်ဘူး ။ အိုး……..တော်…တော်ပါတော့ ဦးရယ်….အား…….အား…သမီး…သမီး.မခံနိုင်တော့ဘူး…… လူကြီးက သဲသဲမဲမဲ ယက်နေသည် ။ သူ့လက်တဖက်ကို ဆန့်တန်းပြီး ဆွေဆွေမာရဲ့ ဖွံ့ထွားလုံးဝန်းတဲ့ ရင်သားတဖက်ကို ဆုပ်ကိုင်လိုက်သည် ။ လျာကြီးကတော့ ဆွေဆွေမာရဲ့ မိန်းမကိုယ် ကို ဖိယက်နေသည် ။ အား……..အိုး……အိုး……အား……..အီး………အမလေး….အို…ကောင်း..သိပ်ကောင်းသွား……အား…….ရှီး………အိုး….. တကိုယ်လုံးက အကြောအခြင်တွေ တုန်ခါသွာပြီး တအား ကောင်းသွားသည် ။ ၀င့်ဝင့်ဝါစိုး ဦးသပြေဆီကို တလှမ်းချင်း လျောက်သွားလိုက်သည် ။ ဦးသပြေသည် ၀င့်ဝင့်ဝါစိုးရဲ့ မိမွေးတိုင်း ကိုယ်လုံးကို မျက်လုံးပြူးကြီးနဲ့ စိုက်ကြည့်နေသည် ။ တောက်…..ကောင်းလိုက်တဲ့ ကျန်းမာရေး…… အရမ်း ၀ဖြိုးပြီး ကျန်းမာရေး မကောင်းတဲ့ ဇနီးသည်ကြောင့် ဦးသပြေသည် ကာမဆက်ဆံမှု မရှိတာ ကြာခဲ့ပြီ ။ ဂေါက်ရိုက်ရင်း ရဲမှူးကြီး ကျော်ဇေယျက သူ့ကို မခက်ပါဘူး…..ကျနော့် တာဝန်ထား…ကျနော့်ကောင်လေးတွေကို ဖန်တီးခိုင်းလိုက်မယ်….မကြာခင် အိုးကောင်းကောင်းနဲ့ စော်လေးတွေ စားရစေမယ်….လို့ ဂတိပေးခဲ့ပြီး သူ့ဂတိအတိုင်း အခုလို ၀င့်ဝင့်ဝါစိုးတို့နဲ့ ဆုံပေးခြင်းပါ ။
တဖက်ခန်းမှာလည်း ဦးမိုးတိမ်သည် ဆွေဆွေမာ ဆိုတဲ့ ကလေးမနဲ့ နှစ်ပါးသွားနေပြီ ။ ဦးမိုးတိမ်ကတော့ မိန်းမ ကင်ဆာရပြီး ကွယ်လွန်သွားလို့ မုဆိုးဖို ဖြစ်နေသူပါ ။ ကျော်ဇေယျရဲ့ စေတနာတွေပေါ့ ။ ၀င့်ဝင့်ဝါစိုးကို ဆွဲဖက်လိုက်ပြီး နှုတ်ခမ်းထူဖေါင်းဖေါင်းလေးတွေကို သူ့နှုတ်ခမ်းကြီးတွေနဲ့ ဖိကပ် စုတ်လိုက်သလို တင်ပါးအိအိကြီးတွေကိုလည်း အားရပါးရ ကိုင်တွယ်တော့သည် ။ တင်ပါးတုံးတွေ ကြားထဲကို သူ့လက်ချောင်းတွေ ထိုးသွင်း နှိုက်ထားသည် ။ အိုး…….ဦး……နာတယ်…..သူ့လက်ချောင်းတချောင်းက ၀င့်ဝင့်ဝါစိုးရဲ့ စအိုပေါက်လေးထဲကို ထိုးနှိုက်မိသွားလို့ ၀င့်ဝင့်ဝါစိုးက ကြောက်လန့်တကြား အော်လိုက်တာ ဖြစ်သည် ။ ဦးသပြေက တဟင်းဟင်းနဲ့ ရယ်မောလိုက်သည် ။ အမလေး….နောင်ကို အဲဒီနေရာထဲ ဒီထက် ကြီးတာကြီး ထည့်တာ ခံရမှာ…မပူနဲ့ မကူနဲ့……ဦးက နောက်ပေါက် အိပ်စပတ်……. ၀င့်ဝင့်ဝါစိုး ဆတ်ကနဲ တွန့်သွားသည် ။ ဘုရား..ဘုရား…မလွယ်ပါလား…..နောက်ပေါက် အိပ်စပတ်ကြီး…တဲ့…..။ သူ့လက်ကြီး ပေါင်ကြားဂွဆုံကို ရောက်လာပြီ ။ စောက်ပတ်ကလည်း အလိုက်န်းဆိုး မသိဘူး ။ အကိုင်တွေ ခံရတာနဲ့ ရွှဲရွှဲစိုနေတော့ ဦးသပြေ သဘော တအားကျသွားသည် ။ ဟာ..သမီးလည်း စိတ်လာနေတယ်ကွာ…ဟီး…..ကဲ လုပ်ကြရအောင်….. သူ့ ပုဆိုးကို ချွတ်ချလိုက်တော့ ညိုပြောင်ပြီး လုံးပတ်တုတ်တဲ့ လီးတန်ရှည်ကြီး ပေါ်လာသည် ။ ၀င့်ဝင့်ဝါစိုး ဘ၀မှာ လီးမျိုးစုံ တွေ့ဖူးခဲ့ပြီးသားတောင် ဦးသပြေရဲ့ လိင်တန်ကြီးကို တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါ စိတ်တွေ ထိန်းကနဲ ထန်တက်လာသည် ။ ဟူး… လီးကြီးက တကယ့် အလန်းစားကြီး….။ ကိုင်လေ… ဦးသပြေ ကိုင်ခိုင်းလို့ သူ့လီးတုတ်တုတ်ကြီးကို ဆုပ်ညှစ်လိုက်မိသည် ။ ပူနွေးနွေး အတန်တုတ်ကြီးက ၀င့်ဝင့်ဝါစိုးရဲ့ သွေးသားတွေကို ဆူပွက်လာစေသည် ။ ထိပ်ဖူး ဒစ်ကြီးက မှိုပွင့်ကားကားကြီးလိုဘဲ ။ ကိုယ်ထည်က ညိုမဲသလောက် ထိပ်ဖူးကြီးက အရောင်ဖျော့သည် ။ ထိပ်ပေါက်လေးကနေ အရည်ကြည်တွေ စိမ့်ယိုကျနေသည် ။စုတ်ပေးလေ..စုတ်ဖူးတယ် မဟုတ်လား..သူမပြောခင်ထဲ စုတ်ချင်နေမိတာ ။ ငိုချင်ရဲ့ လက်တို့ ဆိုတာမျိုး …။ ထိပ်ဖူး ဒစ်လုံးကြီးကို ငုံလိုက်သည် ။စုတ်..စုတ်……လျာလေးနဲ့ ရစ်ပတ်လှိမ့်ကစားပေး…….အိုး…..ကောင်းတယ်……အား…အား…..ဟုတ်ပြီ..ဟုတ်ပြီ..လျာလေးနဲ့ ထိုးပေး….အိုး……ဟုတ်…..ဟုတ်တယ်…..အိုး………ကောင်း…ကောင်းတယ်…..စုတ်..စုတ်… တကယ်တော့ ၀င့်ဝင့်ဝါစိုးသည် ပုလွေ ကောင်းကောင်း မှုတ်တတ်သည် ။
ဘဲတွေ တော်တော်များများနဲ့ ကြုံဘူးတဲ့အတွက် ပုလွေက ကျွမ်းပြီးသား ။ ဦးသပြေက သူ့ကို အပေါစား ထင်သွားမှာစိုးလို့ ပညာကုန် မပြဘဲ အရိုင်းလေးလို လုပ်ပြနေတာ ဖြစ်သည် ။ ဖွံ့ထွားတဲ့ ရင်စိုင်လုံးကြီးတွေက တင်းမာဆဲ ။ ရင်သီးလုံးလေးတွေက စူထွက် မာတင်းပြီး ထောင်ထွက်နေကြသည် ။ ဦးသပြေရဲ့ နှုတ်ခမ်းကြီးတွက စောစောတုံးက ဒီရင်သီးဖုလေးတွေကို ငုံငုံ စို့ပစ်ခဲ့တာ တော်တော် ကြမ်းသည် ။ ငံကျိကျိ ညှီစို့စို့ လီးကြီးကို တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ စုတ်ပေးနေတုံး ဦးသပြေရဲ့ လက်ချောင်းတွေက စောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းကို ကိုင်နေသည် ။ အရည်တွေက ပေပွနေသည် ။ တော်တော် ကြာအောင် စုတ်ပေးနေရသည် ။ သူ တအားကောင်းလာပုံရသည် ။ ပါးစပ်ထဲကို ကော့ကော့ထိုးညှောင့်လာသည် ။ ခေါင်းကိုလည်း ဆုပ်ကိုင်လာသည် ။ စုတ်..စုတ်..စုတ်…လို့ လည်း အော်သည် ။ အား………သုတ်ရည်ပျစ်ပျစ်တွေ တဖတ်ဖတ်နဲ့ ပါးစပ်ထဲကို ၀င်လာသည် ။ သူ့အော်ညည်းသံကြီးက တအားကျယ်သည် ။ လီးကြီးကို တအားကော့ထိုးနေသည် ။ သုတ်တွေကို မြိုချလိုက်…..၀င့်ဝင့်… သူ့အမိန့်ကို နားထောင်သည် ။ အားလုံးကို မြိုချလိုက်သည် ။ဦးမိုးတိမ်သည် ဆွေဆွေမာရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးလုံးဝန်းတဲ့ ရင်စိုင်နှစ်လုံးကို ကိုင်လို့မ၀ဘူး ။ တချိန်လုံး ဆုပ်ကိုင်နေသည် ။ ရင်သီးလုံးလေးတွေကိုလည်း ဆွဲလိုက် ချေနယ်လိုက် ။ သူ့ရဲ့ စံချိန်မှီ လိင်ချောင်း ကြီးကို ဆွေဆွေမာ့ကို စုတ်ခိုင်းသည် ။ ဆွေဆွေမာလည်း သူကျေနပ်တဲ့အထိ တော်တော်ကြာကြာ စုတ်ပေးလိုက် သည် ။ ဦးမိုးတိမ် သည် ဆွေဆွေမာကို ထည့်တော့ ဆွေဆွေမာသည် ယောက်ျားနဲ့ တခါမှ လိင်မဆက်ဆံဘူးသေးတဲ့ အပျိုစစ်စစ် တယောက် ဆိုတာ တွေ့သိသွားရသည် ။ အရမ်း ကျေနပ် သဘောကျသွားသည် ။ ဆွေဆွေမာကို လက်လွှတ်မခံချင်တော့ ။ စီစဉ်ပေးတဲ့ ရဲအရာရှိ ဦးဆန်းထူးတို့ လက်ထဲကိ ပြန်မ ထည့်ချင်တော့ဘူး ။ သူဘဲ အပိုင်သိမ်းလိုက်ချင်သည် ။ ဆွေဆွေမာကို ဖင်ကုန်းခိုင်းပြီး ဖင်ကြားက ပြူးထွက်နေတဲ့ မိန်းမကိုယ်ကြီးကို တစိမ့်စိမ့် ကြည့်လို့ မ၀ဘူး ။ စအိုပေါက် နီညိုညိုလေးကလည်း လာထည့်ပါတော့လို့ သူ့ကို ဖိတ်ခေါ်နေသလိုဘဲ ။ ဒီကောင်မလေးကို အိမ်တဆောင်မီးတပြောင်နဲ့ ကီပင်အဖြစ် ထားလိုက်ဖို့ ဦးမိုးတိမ် ဆုံးဖြတ်လိုက်လေသည် ။ တိုက်တွေ အိမ်တွေ ခြံတွေ တော်တော်များများကို ပိုင်ဆိုင်တဲ့ သူ့လို လူကြီးတယောက် အတွက်က ဒီလိုလုပ် ဖို့က မခက်ခဲဘူး ။ တပည့်တပန်း အချွေအရံကလည်း ပေါများတော့ ဖုန်းတချက် ဆက်လိုက်ရုံနဲ့ လုပ်ချင်တာတွေက အကုန်ပြီးသည် ။
တဖက်ခန်းက ဦးသပြေဆီကို ဖုန်းလှမ်းဆက်ကြည့်လိုက်သည် ။ ဘယ်လိုနေသလဲ လို့…။ ဦးသပြေကလည်း သူနဲ့ လုပ်နေတဲ့ ဂျာကြီးလို့ ခေါ်တဲ့ ၀င့်ဝင့်ဝါစိုး ကို သဘောကျသွားသည် တဲ့ ။ သူ ဒီ စော်လေးကို ကီပင်အဖြစ် ခေါ်ထားမည် လို့ ပြောပြသည် ။ ဦးမိုးတိမ်လည်း စိတ်တူတဲ့ ရောင်းရင်း ဦးသပြေရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို သဘောတူလိုက်သည် ။ တနေ့ကျရင် ဦးသပြေရဲ့ ကောင်မလေးနဲ့ သူ့ကောင်မလေး ကို လဲ ဖိုက်မည် လို့လည်း စဉ်းစားထားသည် ။ ဆွေဆွေမာနဲ့ ဂျာကြီးဝင့်ဝင့်ဝါစိုးတို့ရဲ့ ကံသည် ထူးဆန်းသား ။ ဦးဆန်းထူးနဲ့ သူ့လက်ထောက် ဒုရဲအုပ်လှိုင်မြင့်မိုး တို့ရဲ့ လိင်ကျွန်တွေ အဖြစ် သူတို့နဲ့ လိင်ဆက်ဆံရမယ့်ပြင် သူတို့ လွှတ်ပေးတဲ့ လူတွေနဲ့ ပျော်ပေးရမယ့် အခြေအနေကနေ မထင်မမှတ်ဘဲ ဘ၀ကံက ရုတ်ချည်း ပြောင်းသွားသည် ။ သူတို့သည် ရှင်ဘုရင်နဲ့ ညားရင် မိဖရား…ဆိုသလို ချမ်းသာမြင့်မားတဲ့ လူကြီး ဦးမိုးတိမ်နဲ့ ဦးသပြေတို့ရဲ့ ကီပင် မယားတွေ ဖြစ်သွားရပြီး အိမ်နဲ့ တိုက်ခန်းနဲ့ စီးစရာ ကားသန့်သန့်နဲ့ ကြီးပွားသွားသည် ။ မာဆတ်ခန်းမှာ လုပ်ရာကနေ အလုပ်လုပ်စရာ မလိုတော့ဘဲ နေ့တိုင်း စူပါမားကက်တွေ မောတွေမှာ ဈေးဝယ်လိုက် စားလိုက်သောက်လိုက် လုပ်နိုင်သွားသည် ။ ဦးမိုးတိမ်နဲ့ ဦးသပြေတို့သည် သူတို့ ထင်မှတ်တာထက် အဆမတန် ပိုချမ်းသာနေသလို သူတို့ကို ကိုယ်ဖိရင်ဖိ ပြုစုပေးကြတဲ့အခါ စေတနာ ဗလပွနဲ့ ပေးကမ်းတာတွေက ရက်ရောလှတာကြောင့် ဆွေဆွေမာနဲ့ ၀င့်ဝင့်ဝါစိုးတို့သည် အချိန်တိုတို အတွင်း အဆင်ပြေ ချမ်းသာလာကြပါသည် ။ ဒီနေ့လည်း သူတို့နှစ်ယောက်သည် အသစ်ဖွင့်တဲ့ ပလာဇာကုန်တိုက်ကြီးတခုကို သွားပြီး ရှော့ပင်လုပ် အစားစားကြသည် ။ သူတို့ကို ဒီ ဘ၀ကို ပို့ပေးလိုက်တဲ့ ဦးဆန်းထူးနဲ့ လှိုင်မြင့်မိုး ဆိုတဲ့ ရဲနှစ်ယောက်နဲ့ ပက်ပင်းတိုးသည် ။ သူတို့ကို စားသောက်ဆိုင်မှာ ခေါ်ကျွေးရင်း ကျေးဇူးတင် စကား ပြောကြသည် ။ အိမ်အပြန်မှာ ယာဉ်မောင်း မောင်းပေးတဲ့ အဲယားကွန်း ဖွင့်ထားတဲ့ ဇိမ်ခံကားကြီးပေါ်မှာ လိုက်ပါရင်း သူတို့ အရင်က လုပ်ခဲ့တဲ့ မာဆတ်ခန်း အရှေ့ကနေ ဖြတ်သွားတဲ့အခါ ၀င့်ဝင့်ဝါစိုးက ဆွေဆွေမာကို “ မှတ်မိသေးလား..” လို့ ပြလိုက်လေသည် ။ လူတွေကို မာဆတ်ခန်းမှာ ဟက်ပီးအင်းဒင်း လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀ခရီးသည်လည်း မမျှော်လင့်ဘဲနဲ့ ပွပေါက်တိုးသွားပြီး ဟက်ပီးအင်းဒင်း ဖြစ်သွားရတာကို ယခုအထိ အံ့သြနေကြပေသည် …. ပြီးပါပြီ။